သူ့ရဲ့ IDOL ဖြစ်တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို ကိုခေါ်လာပြီး ချစ် ဇနီးဖြစ်သူ ကမွေးနေ့ SURPRISE လုပ်ခဲ့လို့အံ့သြပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ ကိုပေါက် – Shwewiki.com
တစ် ချိန်က ဇာတ်ကားများစွာကို ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ကိုပေါက်ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ အားပေးချစ်ခင်ရသူပါ။ သူက ခုချိန်မှာ သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးအပြင် အောင်မြင်တဲ့ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးအနေနဲ့ပါ ပရိသတ်တွေ လက်ခံအားပေးခြင်း ခံထားရသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကိုပေါက် က သူ့ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ချစ်ဇနီးက မွေးနေ့ Surprise လုပ်ပေးတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ကိုပေါက် က Myanmar Idol Season3မှာ ချမ်းမြေ့မောင်ချို ကို အားပေးဝန်းရံ ခဲ့သူ ပရိသတ်တစ်ဦးပါ။ ပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးပြီး နောက် မောင်ချို ရဲ့ ပထမဆုံး တေးစီးရီး ခွေ ဖြစ်တဲ့ Eleven ကိုလည်း သဘောကျ နှစ်သက်ပြီး ပါဝင်တဲ့ သီချင်းများကို လည်း ကြိုက်နှစ်သက်တယ် လို့ သိရပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ကို ပေါက်ရဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ ချစ်ဇနီးမှ ချမ်းမြေ့မောင်ချို ကို ခေါ်ပြီး ခင်ပွန်း ကို မွေးနေ့ surprise လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ ကို ပေါက် က ” ချမ်းမြေ့မောင်ချို ကျွန်တော့ဆီရောက်လာတယ်။ သူဘယ်လိုရောက်လာခဲ့သလဲ? ကျွန်တော့ရဲ့ချစ်လှစွာသောဇနီးကမွေးနေ့ လက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကို သူလည်းချစ်ရင်း သူတိုက်တဲ့စပရိုက်က အရမ်းကိုချိုမြိန်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသာ အနုပညာဆန်ပေမယ့် အပြင်မှာအနုပညာဆန်ဆန်မနေတတ်မလုပ်တတ်ဘူး။မိန်းမက မမျှော်လင့်ပဲ ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့မောင်ချိုကိုကျွန်တော့ဆီရောက်အောင်ခေါ်လာပြီးစပရိုက်တိုက်တယ်။”
“ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်သူက ရဲထွဋ်ကြီးပါ။မျှော်လင့်မထားပဲတွေ့လိုက်ရတော့ ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပျော်တာ မျက်ရည်တောင်လည်ခဲ့ရတယ်။ရင်တွေကိုခုန်လို့ပျော်တာဆို မပြောပါနဲ့။ တစ်ခါတစ်ခါပရိသတ်ဖြစ်ရတဲ့ခံစားမှုက ရိုးရှင်းလွန်းပါတယ်။ မောင်ချိုတို့ သားငယ်တို့ အက်စတာတို့နဲ့ရင်းနှီးအောင်ချိတ်ဆက်ဖို့က ကျွန်တော့အတွက်မခဲရင်းပါဘူး။အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဘယ်သူ့ကိုမှ ချိတ်ဆက်ခိုင်းတာမျိုးမလုပ်ပဲ ပရိသတ်နေရာကနေ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအားပေးခဲ့တယ်။
မောင်ချိုကို I DOL seson3 တုန်းကလည်းအားပေးခဲ့တယ်။ အခုခွေထွက်တော့လည်း ဝယ်ပြီးအားပေး။ပြီးတော့ စေတနာအမှန်နဲ့ကြော်ငြာပေးခဲ့တယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့အားပေးမှုတွေနဲ့အတူအနုပညာရှင်မောင်နှမတွေ ရိုးရိုးရှင်းတွေ့ဆုံခင်မင်ခဲ့ကြတာ အရသာရှိလိုက်တာ။ စပရိုက်တိုက်တဲ့ မိန်းမရဲ့စိတ်ကူးနဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကိုမလေးစားပဲမနေနိုင်အောင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချစ်သူမိန်းမရေ။ ” ချစ်ဇနီး ရဲ့ မွေးနေ့ Surprise ကြောင့် မျက်ရည် ဝဲရလောက်အောင် ပျော်နေတဲ့ ကိုပေါက် ရဲ့ အကြောင်း ကို ပရိသတ်တွေ သိရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
တဈ ခြိနျက ဇာတျကားမြားစှာကို ဇာတျပို့ သရုပျဆောငျ တဈယောကျအနနေဲ့ သရုပျဆောငျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ကိုပေါကျဟာဆိုရငျ ပရိသတျတှေ အားပေးခဈြခငျရသူပါ။ သူက ခုခြိနျမှာ သရုပျဆောငျ တဈဦးအပွငျ အောငျမွငျတဲ့ ဒါရိုကျတာ တဈဦးအနနေဲ့ပါ ပရိသတျတှေ လကျခံအားပေးခွငျး ခံထားရသူပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီတဈခါမှာတော့ ကိုပေါကျ က သူ့ရဲ့ မှေးနမှေ့ာ ခဈြဇနီးက မှေးနေ့ Surprise လုပျပေးတဲ့ အကွောငျးလေးကို ပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ ကိုပေါကျ က Myanmar Idol Season3မှာ ခမျြးမွမေ့ောငျခြို ကို အားပေးဝနျးရံ ခဲ့သူ ပရိသတျတဈဦးပါ။ ပွိုငျပှဲ ပွီးဆုံးပွီး နောကျ မောငျခြို ရဲ့ ပထမဆုံး တေးစီးရီး ခှေ ဖွဈတဲ့ Eleven ကိုလညျး သဘောကြ နှဈသကျပွီး ပါဝငျတဲ့ သီခငျြးမြားကို လညျး ကွိုကျနှဈသကျတယျ လို့ သိရပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ ကို ပေါကျရဲ့ မှေးနေ့ ဖွဈတာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ ခဈြဇနီးမှ ခမျြးမွမေ့ောငျခြို ကို ချေါပွီး ခငျပှနျး ကို မှေးနေ့ surprise လုပျပေးခဲ့တာပါ။ ကို ပေါကျ က ” ခမျြးမွမေ့ောငျခြို ကြှနျတော့ဆီရောကျလာတယျ။ သူဘယျလိုရောကျလာခဲ့သလဲ? ကြှနျတော့ရဲ့ခဈြလှစှာသောဇနီးကမှေးနေ့ လကျဆောငျအဖွဈနဲ့ ကြှနျတျောခဈြတဲ့သူကို သူလညျးခဈြရငျး သူတိုကျတဲ့စပရိုကျက အရမျးကိုခြိုမွိနျခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောက ရုပျရှငျတှထေဲမှာသာ အနုပညာဆနျပမေယျ့ အပွငျမှာအနုပညာဆနျဆနျမနတေတျမလုပျတတျဘူး။မိနျးမက မမြှျောလငျ့ပဲ ကြှနျတျောအားပေးနတေဲ့မောငျခြိုကိုကြှနျတော့ဆီရောကျအောငျချေါလာပွီးစပရိုကျတိုကျတယျ။”
“ပါဝငျကူညီအားဖွညျ့သူက ရဲထှဋျကွီးပါ။မြှျောလငျ့မထားပဲတှလေို့ကျရတော့ ပရိသတျတဈယောကျအနနေဲ့ ပြျောတာ မကျြရညျတောငျလညျခဲ့ရတယျ။ရငျတှကေိုခုနျလို့ပြျောတာဆို မပွောပါနဲ့။ တဈခါတဈခါပရိသတျဖွဈရတဲ့ခံစားမှုက ရိုးရှငျးလှနျးပါတယျ။ မောငျခြိုတို့ သားငယျတို့ အကျစတာတို့နဲ့ရငျးနှီးအောငျခြိတျဆကျဖို့က ကြှနျတော့အတှကျမခဲရငျးပါဘူး။အရမျးလှယျပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ဘယျသူ့ကိုမှ ခြိတျဆကျခိုငျးတာမြိုးမလုပျပဲ ပရိသတျနရောကနေ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးအားပေးခဲ့တယျ။
မောငျခြိုကို I DOL seson3 တုနျးကလညျးအားပေးခဲ့တယျ။ အခုခှထှေကျတော့လညျး ဝယျပွီးအားပေး။ပွီးတော့ စတေနာအမှနျနဲ့ကွျောငွာပေးခဲ့တယျ။ ရိုးရှငျးတဲ့အားပေးမှုတှနေဲ့အတူအနုပညာရှငျမောငျနှမတှေ ရိုးရိုးရှငျးတှဆေုံ့ခငျမငျခဲ့ကွတာ အရသာရှိလိုကျတာ။ စပရိုကျတိုကျတဲ့ မိနျးမရဲ့စိတျကူးနဲ့စှမျးဆောငျခကျြကိုမလေးစားပဲမနနေိုငျအောငျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ခဈြသူမိနျးမရေ။ ” ခဈြဇနီး ရဲ့ မှေးနေ့ Surprise ကွောငျ့ မကျြရညျ ဝဲရလောကျအောငျ ပြျောနတေဲ့ ကိုပေါကျ ရဲ့ အကွောငျး ကို ပရိသတျတှေ သိရလောကျပွီ ထငျပါတယျ။